केपि ओलिले यसरि खोलिदिए अर्थमन्त्रिको पोल , ठूलै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि अर्थमन्त्रिलाई तनाब ! – GALAXY
केपि ओलिले यसरि खोलिदिए अर्थमन्त्रिको पोल , ठूलै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि अर्थमन्त्रिलाई तनाब !
परममादेशबाट बनेको देउवा सरकारका आशा गरिएका र केही आश लाग्दो काम गर्ने संकेत देखाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । उनलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा मुछेका हुन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विद्येकमार्फत अर्बौंको सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचार गर्न लागेको आरोप ओलीले लगाए । ‘अर्बौको खेल भइसक्यो, सेटिङ होइन भन्ने ठाउँ छैन, यो कुरा सबैले भनिसकेका छन्, ओलीले भने, ुकतै भन्सार छुट भनेएको छ, कतै अन्य शुल्कमा छुट दिइएको छ । यो बेलामा आएर करका दरहरू किन हेरफेर गर्नुपर्ने थियो ?’
शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका हुन् । उनले सरकारले स्पन्ज आइरनमा शून्य भन्सारदर लागू गरिएको व्यवस्थाप्रति इंगित गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
प्रतिस्थापन विधेयकको नयाँ व्यवस्थाका कारण एमएस बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाउने रोलिङ उद्योग संचालकहरू भने बढी समस्यामा परेको भन्दै यो नीति संशोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
आइरन स्पन्ज र बिलेट आयात सम्बन्धी भन्सारको नयाँ व्यवस्थाले डण्डी उद्योगीहरू दुई कित्तामा विभाजित छन् । आइरन स्पन्ज आयात गरेर नेपालमा नै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरू प्रतिस्थापन विधेयकले आयात प्रतिस्थापन उद्योग मैत्री वातावरण बनेको दाबी गरिरहेका छन् । हाल नेपालमा रहेका ३० मध्ये ६ उद्योग सरकारले नीतिको समर्थनमा छन् ।
सरकारले आइरन स्पन्ज आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क ५ प्रतिशतबाट शून्यमा झारेको छ । यता बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन एक हजार ६ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।
विदेशबाट बिलेट आयात गरेर स्टील उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको भने छड उत्पादन लागत उच्च हुने भएको छ । यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योग नै धराशायी हुने उनीहरूको डर छ ।
उद्योग विस्तार गर्न लाग्ने सम्मको समय उपलब्ध नगराई ६ वटा मात्रै उद्योगलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी यस्तो नीतिगत निर्णय लिएपछि २४ उद्योगका सञ्चालकहरुले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष गुहारेका छन् । उनीहरुले ठूला उद्योगीले सरकारलाई प्रभावमा पारेको समेत गुनासो गरेका छन् । यही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष ओलीले अर्बौंको चलखेल भएको आरोप लगाएका छन् ।
यता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आफूलाई प्रलोभनमा पारेर नीति परिर्वतन गराउने प्रयास भएको गुनासो पोखेका छन् । ‘मलाई कतिपयले प्रलोभन दिएर फकाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई घाटा पार्ने व्यक्ति होइन । त्यस्तो दुस्साहस नगर्न आग्रह गर्छु । स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिने गरी भएको निर्णय फिर्ता हुँदैन ।’